Sal-fuddeydka Dawladda Soomaaliya Iyo Ka Fal-celintii Go’aankii Maxkamadda Adduunka (ICJ) - WardheerNews
W.Q. Saacid Mohamed Geelle
Maxkamadda (ICJ) waxay Talaadadii dhaweyd badda Soomaaliya ugu kala xariiqdey labada dal xuduud cusub. xukunkaas oo Kenya siisey qayb ka mid baddii ay Soomaaliya sida gardarrada ah ugu qabsatey. Badda inta Kenya na laga siiyey waxay hodan ku tahay khayraad dabiici ah sida gaas iyo saliid kayd ah. Sidoo kale waxaa ka buuxa noocao badan oo kalluun ah, lagana abuuri karo fursado kalluumeysi oo Malaayiin doolar dowladdii gacanta ku haysaa ay ku kororsan karto miisaaniyaddeeda sannad walba.
Dawladda Soomaaliya waxay ku degdegtey aqbalaaddii go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah gaartey, kaas oo noo soo celisey inta badan baddii ay Kenya nugu qabsatey. Markii la fiiriyo waqtiga go’aanka maxkamaddu soo baxay iyo waxqtiga uu madaxweynuhu qudbadiisa billaabey oo waqti yari u dhexeysey, waxaa muuqata inuusan siin fursad wadatashi oo uu la yeesho xubnaha xukuumadiisa, quburada badda arrinkaan Soomaaliya kala talineysey iyo qareennadii matalayay Soomaaliya intaba.
Badda Inta Soomalia laga xukumey oo runtii ah mid aan ayaduba baaxaddeedu yareyn, ugama uusan hadlin Madaxweynuhu qudbaddiisii degdega ahayd, mana ku muujin inuu ka xunyahay ama waxa uga qorshaysan xukuumadiisa. Madaxweynuhu wuxuu ammaan wayn huwiyey maxkamadda ICJ oo baddiisii uu u dhaartey difaaceeda qayb ka mida u xukuntey Kenya.
Inkasta oo Maxkmaddu sheegtey inaan horey xad rasmi ah u jirin, haddana sida ay qabaan qubaro badani oo ajnabi iyo Soomaali isugu jira, waxaan shaki ku jirrin in Soomaaliya ay lahayd guud ahaan badda la isku haystey. Gar-soore Cabdi-qawi oo ah muwaadin Soomaali ah oo ka mid ah gar—soorayaasha Maxkamadda ahna nin khabiir ku ah sharciga caalamiga ee xadadka waddamada, horeyna Madaxweyne uga soo noqdey isla maxkamaddan ICJ, si adag ayuu u diidey go’aanka maxkamadda, isagoo ku tilmaamey in xukunkaasi yahay mid eex ah, qilaafsan xeerarkii iyo sida ay maxkamaddu wax u xukumi jirtey, isla markaasna ah mid Kenya u xalaalaynaya bad aysan lahayn.
Madaxweyne Farmajo wuxuu ku yiri qudbaddiisa “iyadoo la ixtiraamayo sharciyada caalamiga ah, dowladda federaalka Soomaaliya waxay aqbashey xukunka maxkamadda si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah. Soomaaliya waxay ka rajaynaysaa in dowladda Kenya ay ixtiraami doonto sarraynta sharciga caalamiga ah iyo go’aanka Maxkamadda’’. Waxaa is weydiin u baahan sharuucda iyo xeerrarka caalamiga ah oo Garsoore Cabdiqawi uusan ogayn oo uu farmaajo ogyahay waxna ku aqbalayo waxa ay yihiin iyo halkuu kala yimi. Uhuru Kenyatta oo awalba hoos ahaan ugu qanacsanaa go’aankii maxkamaddu gaartey laakiin ku jira is-diidsiis yaan lagu fahmin ah. Marka uu maqlo hadalka Farmajo soo kuma sii dheeri galin doonto in uu ku sii adkeysto damaciisa siina raadiyo wax ka badan inta loo xukumey.
Kenya waxay ku gacansayrtay go’aankii Maxkamadda (ICJ) ay ugu xukuntey in la siiyo qayb ka mida badda Soomaaliya oo aysan markii horeba xaq u lahayn. Wuxuu sheegey waa sida uu hadalka u dhgey eh ” in ay Kenya diideyso gebi ahaanba xukunkaas, aysana aqoonsaneyn natiijada go’aankas ICJ. isagoo intaa ku daray in xukunka ICJ uu aad u khaldanyahay uuna yahay mid shaki galinaya sii jiritaanka iyo sharciyadda maxkamadda ICJ iyo garsoorkeeda. Kenyatta wuxuu sii raaciyey inay uga sii dareyso xaaladda nabadda iyo amniga ee gobolka oo awalba liidatey, waxaan soo jeedinaynaa in wada hadal lagu dhammeeyo arrintaan.
Halka ay iska taagtey Kenya xukunka maxkamadda oo isagu ah mid aan racfaan lahayn waxay u sahli doontaa mar walba in ay u ekaato dulmane, isla markaana loo tixgaliyo ayna tanaasulaad badana ku hesho haddii mustaqbalka wada-hadal ay sii yeeshaan Soomaaliya.
Xaggee Laga Aadayaa Halkaas
Xukunka ICJ ayaa ah mid kama dambeys ah oo aan racfaan laga qaadan karin, laakiin maxkamaddan, oo loo aasaasay dagaalkii labaad ee adduunka kadib in ay xalliso khilaafaadka u dhexeeya dowladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay, ma ay lahan awood ay ku fulliso xukumada ay gaarto. Laakiin waxay la talin iyo soo jeedin ku leedahay Golaha Ammaanka. Kuwaas oo haddii ay doonaan hadba sida danaha dowladahoodu yihiin go’aan uga gaara waxa loo soo gudbiyey. Soomaaliya ma lahan dowlad leh awood ay ku soo dhacsato kuna ilaashato badda loo xukumey, Kenyana ayadoo xaaladdan iyo qaybsanaanta iyo midnimo la’aanta siyaasaddeed ee Soomaalida ka faa’iideysanaysa, waxay culeys badan saari doontaa madaxda Soomaaliya xukumeysa haddeer iyo mustaqbalka soo socdaba. Waxaa u sahlanaan doonta inay gaarto danaha ay leedahay, waxaana u sahli doonta labadan xaaladood:
1- Nairobi oo sii noqota barkullanka laga karkariyo siyaasadda Soomaaliya, gurina u sii ahaata siyaasiyiinta Soomaaliya intooda badan, kuwaas oo guryo iyo maalgashi badan uga sameystey hantidii ay dalka horey uga soo dhaceen.
2- Soomaalida oo dhaqan ahaan ah bulsho aan taariikhda dib u fiirin, isla markaana ah ummad ay qabyaaladi dilootey, waxay fursad u siin doonaan Kenya haddii ay soo doortaan xukuumad ay hoggaaminayaan koox danneyste-yaal ah oo ka maran darreen waddaninimo, oggolaadana in wadahadal laga galo damaca Kenya ee badda Soomaaliyeed.